🔥Masteron: hahazoana tombony be hozatra ary hampitombo ny famaritana ny vatana
Ao amin'ny andalana vitsivitsy manaraka, hiresaka momba ny iray anabolika manana fahaiza-manao tsara indrindra amin'ny fahaizany mampitombo ny tombam-bidy hozatra izahay ary mamela anao hampihena ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana. Jereo hoe iza ny tombony azon'i Masteron tsara indrindra sy ny fomba hahamety azy ireo indrindra hahazoana valiny lehibe indrindra amin'ny tsingerinao!
Masteron dia iray amin'ireo steroid anabolika izay be mpampiasa indrindra amin'ny mponina, satria mandray anjara mavitrika amin'ny fizotran'ny fanomanana, indrindra amin'ireo atleta manana hazakazaka avo lenta amin'ny karazana fanatanjahan-tena samihafa, izay mety miainga amin'ny fampiakarana ny lanjany ka hatrany amin'ny bodybuilding.
Izy io dia karazana anabolika hafahafa, satria ny fananany dia manampy amin'ny tombony marobe amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny vatana amin'ny ankapobeny ary koa fandanjana ny fiasan'ny vatana tena ilaina izay manatsara ny vokany, toy ny:
Mampihena ny fatran'ny estrogen ao amin'ny vatana
Mampitombo ny kalitaon'ny hozatra
Manatsara ny syntetika proteinina
Mampihena ny fihazonana ny tsiranoka amin'ny farany ambony
Manafaingana ny metabolisma ary manampy mandoro tavy
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny olona mitady fiovan'ny vatana haingana kokoa, na ny fampitomboana ny fahombiazany sy ny fahombiazany amin'ny ankapobeny, dia afaka mahazo valiny mahavariana mandritra ny tsingerina iray natao tamin'i Masteron, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Drostanolone.
Amin'ity manaraka ity dia ho hitanao ny fampahalalana rehetra ilaina indrindra izay mifandraika amin'ny Masteron sy ny fomba fampiasana azy io hanangonana ny tsingerinao ary hahazoana ny valiny farany azo trandrahana miaraka amin'ny effet effet minimum.
Fanontaniana toy ny:
Inona ny Masteron?
Inona no vokany eo amin'ny vatana?
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny Masteron?
Ny voka-dratsin'ny lehilahy sy ny vehivavy?
Ahoana ny fampiasana azy tsara?
Raha te hahalala ireo sy ireo valiny hafa dia aza esorina ny lohahevitra ato amin'ity lahatsoratra ity, tohizo ny famakiana sy ianaro ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny Masteron sy ny fomba hanampian'ny steroid anabolika anao hahatratra ny tanjon'ny fiovan'ny hatsarana haingana sy azo antoka.
Inona ny tantaran'i Masteron?
Masteron dia ampahany amin'ny tsipika anabolika anabolika izay novolavolaina tamin'ny tapaky ny taona 50 an'ny iray amin'ireo orinasa mpamokatra fanafody malaza indrindra tamin'izany fotoana izany, Syntex.
Nanomboka tamin'ny taona 70 no namarotana azy, miaraka amin'ny anarana hafa ankoatran'ny Masteron, toy ny: Drostanolone, Drolban sy ny hafa.
Ny fampiharana voalohany dia natao mba hampitomboana ny fahafahan'ny fitsaboana ireo vehivavy voan'ny homamiadan'ny nono, satria misy fiatraikany lehibe mifandraika amin'ny estrogen ao amin'ny vatana.
Na izany aza, ny vokadratsiny dia nahasarika ny sain'ny atleta ary noho io antony io dia tsy ela dia nanomboka nampiasaina indrindra izy ireo nandritra ny fotoana fiomanana amin'ny fampitomboana ny fahombiazana sy ny famaritana ny vatana tsara kokoa.
Masteron, fantatra koa amin'ny anarana hoe Drostanolone dia ampahany amin'ny rojom-pivalanana anabolika an'ny DHT (Dihydrotestosteron), izay fitambarana anabolika be.
Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny endrika Masteron hita matetika dia ny ester propionate (ester fohy), na izany aza, misy ihany koa ny mety ho hita ho enanthate (ester lava).
Araka ny voalaza teo aloha, ny fampiasana klinika an'i Masteron dia natao hanampiana amin'ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny nono, izay anehoan'ny fanadihadiana ny fahaiza-manaony hamongorana tranga maro karazana karazana homamiadana, raha ampiasaina miaraka amin'ny Tamoxifen.
Raha ampiasaina amin'ny tanjona hatsarana, Masteron dia mikendry kokoa ny fanatsarana ny fikolokoloana ara-batana noho ny fahazoana tombony be amin'ny hozatra.
M-Drol dia pro-hormonal izay mamolavola ny endrika bioavailable an'ny anabolika Masteron rehefa novolavolain'ny vatana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny vokatra sy ny tombony azo nandritra ny tsingerina natao tamin'ny M-Drol dia azo sokajiana ho mitovy amin'ny an'ny Masteron ihany.
Na ny mety anabolika, ny fanatsarana ny fikolokoloana ara-batana ary ny fihenan'ny tavy amin'ny vatana dia vokatra mitovy amin'izany amin'ny tsingerina vita amin'ity pro-hormonal ity.
Raha toa ny mpampiasa kosa dia mitatitra ny tombony eo anelanelan'ny 6 sy 10 pounds mandritra ny fotoana fampiasana ny M-Drol.
Ankoatr'izay, satria pro-hormonal mahery izy io, ny M-Drol dia mitaky koa ny TPC (fitsaboana aorian'ny tsingerina) ary ny fikarakarana mifandraika amin'ny fanamorana ny hormonina, ary koa ny Masteron mihitsy mba hampihenana ny voka-dratsiny ary hampitomboany ny tombony azo avy amin'izany.
Ny tsingerina natao tamin'i Masteron dia miavaka indrindra amin'ny fanatsarana ankapobeny ny toe-batana, miampy ny fihenan'ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana noho ny tombony maina nomen'ny raikipohy.
Ny heriny anabolika dia antonony, na izany aza, satria anabolika manana fahaizana aromatization ambany izy io, dia ampiasaina indrindra amin'ny dingana fanomanana ireo atleta izay mitady fifehezana ara-batana araka izay tratra.
Ny antsipiriany manaitra iray an'ny Masteron dia ny mety ho androgen ambany indrindra, izay azo ampidirina mora foana amin'ny tsingerina ataon'ny vehivavy mitady tombony be hozatra ary mampihena ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana.
Izy io koa dia manome fitomboana lehibe amin'ny tanjaka, izay mety hahasoa indrindra an'ireo olona mifantoka amin'ny fihenan'ny tavy izay misy ny tanjaka mazàna mihena, amin'ity tranga manokana ity, ity anabolika ity dia azo ampiasaina amin'ny fomba hialana amin'io vokany io. amin'ny fomba tsotra sy azo antoka.
Na izany aza, ny tombontsoa tsara indrindra mifandraika amin'ny tsingerina miaraka amin'i Masteron dia miharihary kokoa amin'ny fanatsarana ny hatsarana amin'ny ankapobeny, indrindra amin'ireo olona manana sakafo mifantoka amin'ny fihenan'ny lanja.
Amin'ity tranga ity, ity anabolika ity dia afaka manao ny endrika hakitroky ny hozatra sy ny famaritana ny vatana hahatratra antsipiriany avo lenta, izay ahafahana mijery sy mamaritra mora foana ny fahatapahana eo amin'ny kibo.
Ny voka-dratsy lehibe mifandraika amin'ny fampiasana Masteron
Ny voka-dratsy mahazatra indrindra mandritra ny tsingerina natao tamin'ity steroid anabolika ity dia matetika mifandray amin'ny fiovan'ny hormonina izay misy fiatraikany amin'ny vatana mandritra ny fizotrany.
Jereo eto ambany ny vokany lehibe indrindra mandritra ny tsingerin'ny Masteron:
Aromatization: na dia Masteron dia karazana steroid anabolika manana fahaiza-manao ambany ho an'ny aromatization, nanoro hevitra ireo mpanohitra aromatase hampiasaina mandritra ny tsingerina mba hahazoana antoka fa tsy hisy vokany ratsy io vokatra io, ka miteraka gynecomastia mety ho an'ny lehilahy.
Virilisation: Masteron dia zava-mahadomelina tsy misy androgen ambany, izany hoe amin'ny ankamaroan'ny tranga dia azo ampiasain'ny vehivavy soa aman-tsara izy io, na izany aza, ny soritr'aretina toy ny mony sy ny fitomboan'ny menaka hoditra dia tena mahazatra.
Kolesterola mitombo: mety hisy fiantraikany mandritra ny tsingerina io, hampitombo ny mety ho fitrangan'ny aretim-po amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny ary hanimba ny endrika lipidin'ny vatana iray manontolo, hampitombo ny LDL (kolesterola ratsy) ary hampihena ny HDL (kolesterola tsara)
Fanakanana ny axis hormonal: Ny tsingerin'ny Masteron dia manakana tanteraka ny axis hormonal an'ny vatana, izay misy fiantraikany amin'ny famokarana testosterone voajanahary, noho izany dia ilaina ny manambatra azy amin'ny endrika testosterone exogenous hafa izay misy ka mijaly faran'izay kely ny vatana mandritra ny ny tsingerina.
Hepatotoxicity: mety hiteraka fahasimbana amin'ny aty izany, na izany aza, ny haavon'ny poizina ao aminy dia heverina ho ambany, satria anabolika azo tsindrona ary satria tsy dia metabatisma loatra ilay taova. Na izany aza, mbola ampirisihina hampiasa mpiaro ny atiny, satria ny fiarahana amin'ny fanafody hafa dia ilaina ao anaty tsingerina miaraka amin'i Masteron ary mety hiteraka entana be loatra amin'ny aty izany.
Ahoana ny fakana Masteron
Ity dia kinova anabolika izay hita amin'ny endriny tsindrona indrindra, noho izany ny endrika fampiasana dia miankina betsaka amin'ny antsasaky ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana.
Satria ny ester lehibe hita dia propionate, ny tolo-kevitra lehibe ampiasaina dia ny fampiharana isan'andro hafa amin'ny dosages izay mety miovaova eo amin'ny 100 sy 150mg isaky ny fampiharana.
Ny fatra isan-kerinandro dia mety miovaova eo anelanelan'ny 300 sy 400mg arakaraka ny fatra lehibe voafantina ho an'ny fampiharana tsirairay.
Ny tombontsoa tsara indrindra an'ny Masteron dia miharihary ao anatin'ny fotoana fohy ary ny fampiasana mandritra ny 6 herinandro mahery dia tsy tokony hasaina.
Noho izany, tena nanolorana tena ho amin'ny fanomanana dingana tara ary tsy mety raha ampiasaina mandritra ny fotoana fiomanana iray manontolo ho an'ny fifaninanana na hetsika mitovy amin'izany.
Dosis ho an'ny fampiasana vehivavy an'ny Masteron dia kely kokoa, atolotray tokony ho 100mg isan-kerinandro.
Ny endrika fampiasana dia mitovy, fampiharana isan'andro hafa manodidina ny 25 ka hatramin'ny 35mg isaky ny fampiharana.
Satria fanafody manakana tanteraka ny axis hormonal, dia ilaina ny manambatra azy amin'ny karazana testosterone amin'ny propionate na enanthate.
Ny fampiharana dia intra-hozatra lalina, miaraka amin'ny fiheverana lehibe ny fahadiovana eo an-toerana mba hisorohana ny vavony.
Ho an'ny fampiasana fifaninanana dia entanina fa ny vanim-potoana hahitana ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana dia miovaova eo anelanelan'ny 3 sy 4 herinandro, noho izany, ho an'ny fitsapana fanoherana ny doping, dia raiso io vanim-potoana fampiasa farany io.
Ahoana ny fomba hanangonana tsingerina miaraka amin'i Masteron
Araka ny hitanao, ny tsingerin'ity steroid anabolika ity dia tsy maintsy ampiana fanafody mifameno hafa mba hahafahan'ny vatana mijanona ho milamina, ary ny fahasimban'ny fihenan'ny axis hormonal dia tsy dia miharihary.
Mba hametrahana tsingerina mahomby amin'ity karazana steroid anabolika ity, ny safidy tsara indrindra dia tsy misy fisalasalana ny fampiasana vokatra iray izay misy io singa mavitrika io ihany ary manome valiny mitovy amin'izany miaraka amin'ny vokatra ratsy kely.
Noho izany, safidy tsara ny manolo ny M-Drol ho an'ny Masteron mba hampitomboana ny vokany amin'ny tombam-bidy hozatra ary koa ny fandoroana tavy amin'ny vatana miaraka amin'izay.
Raha mitady safidy azo antoka sy azo antoka ianao hahafahanao manafatra M-Drol, miarova hatrany satria amin'ny manaraka dia hanondro iray amin'ireo magazay an-tserasera malaza indrindra izahay amin'ny fivarotana pro-hormonal sy fanafody fanampiny nafarana avy any Brezila.
Torohevitra Masteron Propionate
Anaran'ny molecular: [17beta-hydroxy-2alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one propionate]
Milanja molekular: 360.5356
Mpanamboatra: Syntex (tany am-boalohany), laboratoara ambanin'ny tany maro (ankehitriny)
Doka mahomby (lehilahy): 350mg ka hatramin'ny 500mg / herinandro
Doka mahomby (vehivavy): 50-100mg / herinandro
Fiainana miasa: 2-3 andro
Ny antsasaky ny fiainana: 1 - 1,5 andro
Fotoana fitadiavana Doping: 3 herinandro
Ratio anabolika / androgenika: 62:25
Molar faobe: 304,46 g / mol
Masteron dia anabolika miaraka amin'ny toetra mikendry ny fampihenana ny isan-jaton'ny tavy ao amin'ny vatana ary manana hery anabolika antonony.
Noho izany, ho an'ireo olona mitady hanatsara ny tombony betsaka, na dia mampihena ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana aza, tsy mila mampiasa fitambarana fanafody hafa, ny safidy lehibe dia ny manolo ny M-Drol.
M-Drol dia pro-hormonal mahery izay afaka mamolavola ny vokatra mitovy amin'ny Masteron ao amin'ny vatana, mampiroborobo ny mety ho fananganana hozatra ho an'ny lehilahy.
Ny fampiasana azy ho an'ny vehivavy dia tsy soso-kevitra fatratra, noho ny toetra mampiavaka ny masculinizing azo amin'ny fampiasana an'io prohormonal io.
Mba hahafahanao manafatra ny M-Drol miaraka amin'ny fiarovana ary manome toky fa mividy vokatra azo antoka ianao ary tena hanome tombony mitovy amin'ny naterak'i Masteron, dia mividiana ny pro-hormonal anao ao amin'ny Best Supplement Store.
Ity dia iray amin'ireo fivarotana an-tserasera nentim-paharazana indrindra amin'ny Internet ary manana fanovozan-kevitra lehibe ho mpivarotra famenon-tsakafo sy mpanafatra hormonina manana kalitao avo indrindra.